Welcome / Soomaali
Waxbaddan kabaro: www.pps.net Kaqayb qaadashada Bulshada iyo Arimaha Dadweynaha, pubinfo@pps.net, 503-916-3304.
Helida warka degdega ah - si dhakhso ah
Dib u dhicyo kudhaca warka laxiriira-jawiga Xaaladaha iskuulka degdega ah Dhacdooyin gaar ah:
Qoraalka Fariinta CUSUB: Doorashada-Fariinta Iskuulka loo dirayo qoraalka fariinta Haa ama Y dhinaca 68453.
Twitter: @PPSConnect at www.twitter.com
Wicitaanka teleefoonka: Wicitaanada garaacida-ootamaatikada ah lambarka “aasaasiga ah” ee kusaabsan foomka isdiiwaan gelinta ardayga isku diiwaan geliyo dhammaan luuqadaha lataageeray.
Sannad-dugsiyeedka wuxuu soconayaa Agoosto 28-Juun 5. Xannaanadu waxay bilaabataa Sebtembar. 3. taariikhda fasaxyada, maalmaha qorsheynta macallimiinta, shirarka macalimiinta-waalidka iyo taariikhaha kale ee muhiimka ah, ka fiiri jadwalka dugsiga oo buuxa.
PPS waxay adeega baska jaalaha ah siisaa ardayda PK-8 iyada oo ku xiran masaafada ay u jiraan dugsiga iyo tixgelinta ammaanka. Waxyaabo dheeraad ah ka ogow, 503-916-6901
Tikidhada bas raacida TriMet ee loogu talogalay ardayda dhigta dugsiga sare
Barnaamijka Raacida Dhallinyaradu wuxuu tikidho Trimet lagu raacayo oo lacag la’aan ah siiyaa ardayda dugsiga sare. Ardaydu waxay helaan tikidho Trimet lagu raacayo oo lacag la’aan ah waxaa mahad leh Trimet iyo Dugsiyada Dadweynaha Portland. Jadwalada Trimet.
Kabixi cuntooyinka iskuulka halkan www.SchoolCafe.com ama keen jeeg xafiiska iskuulkaaga ama maqaaxida iskuulka kutaala.
Ardayda u qalanta waxay helayaan cuntooyin bilaash ah; ardayda u qalanta ama xaqa u leh cuntooyin qiimo-jaban waxay sidoo kale heli doonaan cuntooyin bilaash ah Mahadi haka gaarto arintaas gudiga Sharci dejinta Oregon.
Dhammaan ardayda dhigta iskuulada soo socda – ayada oo aan la eegayn dakhliga -waxay qaadanayaan cuntooyin bilaash ah: Alliance @ Meek, Boise Eliot/Humboldt, Cesar Chavez, Faubion, George MS, Harrison Park, James John, Jefferson HS, Kelly, King, Lane MS, Lee, Lent, Madison HS, Marysville, Pioneer Program, Rigler, Roosevelt HS, Rosa Parks, Scott, Sitton, Vestal, Whitman, Woodlawn iyo Woodmere.
Lacagaha-buuxa ee cuntooyinka:
Heerka 5-K-Kasta $2.00
Heerarka 6-8 $3.15
Heerarka 9-12 $3.40
Waxbaddan kabaro: Kala xiriir maqaaxida iskuulkaaga ama Adeegaha Nafaqada Iskuulada Dadweynaha Portland, 503-916-3399
Xarumaha caafimaadka ee ku saleysan dugsiga: Waxay aqbalaan caymiska iyo sidoo kale waxay caawin karaan qoysaska aan caymiska lahayn. Xarumaha waxay ku yaalaan: Cleveland, Franklin, Jefferson, Madison (kambaaka Marshall) iyo dugsiyada sare ee Roosevelt.
Tallaalada: Dhammaan ardayda waa inay haystaan caddayn ah hal qiyaas dhammaan talaalada loo baahan yahay maalinta koowaad ee dugsiga. Carruurta aan sida ugu dhakhsaha loo cusboonaysiinin tallaalkooda Febraayo 19, 2020 ayaa laga joojin doonaa dugsiga illaa iyo inta tallaalkoodu lagasoo cusboonaysiinaayo.
La-taliyayaasha, daroogada / khamriga, caafimaadka, edebta: Adeegyada Ardayda ee PPS 503-916-5460, studentservices@pps.net
Wadaagista kireynta guryaha Iskuulada Dadweynaha Portland
Kireynta guryaha Iskuulada Dadweynaha: Shaqsiyaad iyo kooxaha bulshadu waxay jadwal ka samayn si ay u isticmaalaan dhismayaasha PPS saacadaha aanu iskuuladu furneyn iyaga oo haysta ogolaanshaha xafiiska Isticmaalka Dhismayaasha Bulshada (CUB).
Walaac ku saleysan dugsiga
PPS waxay bedeleysaa habka aan qoysaska uga caawinno inay wax ka qabtaan oo ay xaliyaan su'aalaha ama walaacyada. Waqtiga ku-meel-gaadhka ah, waxaan joojinaynaa booska Ombudsman..
Waxaan ku aqbalnaa ashtakooyinka qarsoodiga ah email adigoo kuso diraya anonymouscomplaints@pps.net iyo taleefanka 503-916-3462..
Wax dheeri ah baro: Arag siyaasadda cabashada iyo habka xalinta cabashooyinka..
La soco horumarka waxbarasho
Kafiiri heerarka ardayga, kaqayb galka iyo shaqooyinka iyo iimaylka macalimiinta tooska Iskaashiga WaalidkaVUE.
Waxbaddan kabaro: Meesha iskuulkaaga ama www.pps.net ParentVUE
Diyaar u noqoshada shaqada iyo kulliyada
Shuruudaha qalinjebinta: Ogow waxa aad u baahan tahay in aad ka qalinjabiso dugsiga sare.
Diyaargarowga Kuliyada iyo shaqada: U diyaargarow Qalab bogga internetka ee PPS loogu talagalay qorsheynta kulliyad iyo xirfada- barshada shaqo ilaa tilmaan bixinta oggolaanshaha
Ururka U dhaxeeya Iskuulada Portland wuxuu bixinayaa Barnaamij Ciyaaro Dhallinyarada ah (heerarka 6-8) iyo Barnaamijka Dugsiga Sare.
Waxbaddan kabaro: iskuulkaaga ama www.pilathletics.com
Waalidiinta/masuuliyiinta waxaa lagu martiqaadaa inay ku biiraan guddiyada degmada si ay uga caawiyaan inay PPS u sheegaan siyaasadaha iyo dhaqanka.
Wax dheeri ah baro ama wac 503-916-5234. Guddiga La-talinta Waxbarashada Gaarka ah, 503-916-3723 • Guddiga La-talinta ee TAG, 503-916-3358 • Golaha La-talinta Waalidka ee Magangalyada Title I-C, 503-916-5777 • Golaha La-talinta Bartayaalka Luqadda Ingiriisiga, 503-916-6525.
Mutadawaciintu waxay siiyaan gargaar qiimo badan taageerida fasalka, kobcinta manhajka, adeega ururada waalidka (PTA, Kooxaha Buustarka, iwm) iyo daryeelka suurtagal ah. Iskuulada Dadweynaha Portland waxay cusboonaysiinayaan hawlaha lagu baaro asalka dhallashada si loo ilaaliyo ammaanka ardayga loona sameeyo sinaan ay u simanyihiin adeeg helida dadka danaynaya u adeegida iskuuladeena.
Waxyaabo dheeraad ah ka ogow ama la xiriir volunteer@pps.net.
Helitaanka luqadda ee loogu talagalay qoysaska
Waaxda Adeegyada Luuqadda waxay siisaa adeegyo bilaash ah waalidiinta iyo mas'uuliyiinta PPS. Waad weydiisan kartaa dugsiyada si ay kaaga caawiyaan inay kuu balamiyaan turjumaan kaa caawiya isgaadhsiinta afka ee shirarka dugsiga ama codso turjumid qoraal ah oo dukumiinti ah..
Shaqaale laba luqoodle ah ayaa sidoo kale diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalahaaga inta lagu jiro saacadaha dugsiga. Ka wac Adeegyada Luuqadaha badan ee Taleefoonka:
Kuwo kale/Macluumaad dheeri ah 503-916-3589
Isku diiwaan gelinta iskuulka
Liiska iskuulada/macluumaada xiriirka
Raadi iskuulkaaga deriska kula ah
Kasoo qaado foomka isku diiwaan gelinta iskuulkaaga ama kasoo dejiso boggaan internetka www.pps.net .
Raadi iskuulada diirada lasaarayo, barnaamijyada dhexgalka luuqada labbaad, iskuulada bedelaada iyo madax banaanida.
Dib u celinta ardayda: Ugu cusboonaysii foomkaaga isdiiwaan gelinta si sannadle ah iskuulkaaga. Foomka wuxuu kusiinayaa fursado balaaran oo lagu sharxayo jinsiyada ardayga/qowmiyada si ay ugu caawiso Iskuulada Dadweynaha Portland in ay si fiican ugu fahmaan uguna adeegaan arday kasta.
Kahor-K iyo Xanaanada: Barnaamijyo baddan oo Kahor-K ayaa lasoo bandhigay; macalin-bilaash ah iyo maalin-buuxda oo xanaanada ah ee loogu talogalay dhammaan qoysaska. www.pps.net (Raadi “Kindergarten”)
Wareejin daryeel ilmo ah Kahor- iyo kadib-iskuulka: 503-916-3230, nhauth@pps.net
Ingiriiska sida Luuqada Labbaad: 503-916-6525
Diiwaan dugsiga xaafaddaada. Haddii loo baahan yahay gargaar luqadda, diiwaan at Xarunta Soo-dhaweynta, Bisha Agoosto 22 ilaa 31, 8:30 subaxnimo ilaa 4 galabnimo. Xarumaha waxaa sidoo kale la qiimeeyo heerka ardayda luqadda Ingiriisiga
Wilson High School: 1151 SW Vermont St.
Waxbarashada Gaarka ah: 503-916-3152
Iskuulada Dadweynaha Portland waxay kuboorinayaan qoysaska qabba welwelo kusaabsan horumarka ilmahooda kuwaas oo kayar da’da 5 in lagu sameeyo qiimeyn loogu talogalay adeegaha waxbarashada gaarka ah. Wac Barnaamijka Ilmanida Hore ee Multnomah, 503-261-5535, wixii kusaabsan wareejinta lagu wareejiyo Kooxda Qiimeynta Ilmanimada Hore ee Iskuulada Dadweynaha Portland. Ula xiriir si toos ah Kooxda Iskuulada Dadweynaha Portland haddii aad qabtid su’aalooyin: 503-916-3426. (English/Spanish)
Qoysaska kawelwelsan da’da-iskuulka waxbarashada ilmaha, dhaqaaqa, isku-filnaanta, xiriirka ama xirfadaha dareenka-bulshada waxaa khasab ku ah in ay kala hadlaan macalinka ilmaha waxyaabaha kusaabsan qiimeynta adeegaha. Haddii aad qabtid su’aalooyin, laxiriir maamulahaaga.
Leh mowhibad iyo Talo: 503-916-3358
Ardayda dhigta K-12 ayaa marka hore laga soo sharxayaa dhinaca macalimiintooda ama waalidka/weliga kadibna waxaa laga qiimeynayaa dhinaca Iskuulada Dadweynaha Portland. Haddii ardayga buuxiyo shardiga, asaga ama ayada waxaa loo dooranayaa in uu kaqayb galo barnaamijka.
Arday kasta wuu guuleysanayaa ayada oo aan loo eegin jinsiyadiisa ama fasalka
Agaasimaha Guud iyo Guddiga share mudnaanta ardaygu xuddun: Kormeeraha Guud Carole Smith iyo go’an Guddiga Dugsiga Portland mudnaanta la wadaago ee 2015-2017 diiradda hogaan adag ee dugsi walba; taageertaa iyo cod macalimiinta; diyaarinta ardayda kulliyad iyo xirfado; waxbarasho tayo in la kordhiyo qorista; dhaqanka taageeraa si loo yareeyo anshaxa takooris iyo isudhignaan; bixinta iyo labaatan dugsiyada qarnigii koowaad iyada oo bond; oo isu dheelitira diiwaangelinta si loo bixiyo sinaanta barnaamijka.
Iskuulo Wanaagsan. Derisyo Wanaagsan
Qoysaska waxaa loo balan qaadayaa in ay boos ka helaan dugsiga xaafadooda ku yaala ee loo qoondeeyay iyada oo la eegayo cinwaanka. Liiska dugsiyada/macluumaadka lagala xiriirayo
Wareejinta deriska: Si looga wareego iskuul deriska ah oo aan ahayn iskuulkaaga adiga laguu qoondeeyay waxaa khasab kugu ah in aad sameyso fayl codsi ah oo aad kusharxayso sababta. Codsashooyinka waxaa wanaagsan in labuuxiyo kahor Juun ee sannad dugsiyeedka xiga. Iskuulada Dadweynaha Portland waxay qiimeynaysaa oona go’aamineysaa codsigaaga.
Iskuulada Diirada Lasaaro: ku gaar ah meelaha sida seyniska ama fanka. Kucodso bakhtiyaa nasiibka Febraayo.
Dhexgalka luuqada labbaad: kucodso bakhtiyaa nasiibka Febraayo ee heerka xanaanada ama samee fayl codsi ah oo heerarka sare ah. Macluumaada www.pps.net, 503-916-3120.
Keliya qoysaska deriska ah
James John K-5 (George MS)
Rigler K-5 (Beaumont MS)
Scott K-5 (Roseway Heights MS)
Sitton K-5 (George MS)
U furan qoysaska degan guud ahaa-degmada
Ainsworth K-5 (West Sylvan MS)
Atkinson K-5 (Mt. Tabor MS)
Beach K-5 (Ockley Green MS)
Roseway Heights (K-3 growing to K-8)
Woodstock K-5 (Hosford MS)
Waddooyinka Baddan ee Qalinjebinta: Ardayda qaarkooda waxay kafaa’ideystaan nidaamka bedelaada ah ay kujirto iskuulada bedelaada ah, barnaamijyada kahortaga kategida-iskuulka ama iskuulada madax banaan. www.pps.net, 503-916-5437.
Katagey iskuulka qalinjebin la’aan? Wac Xarunta Dib isugu xirka Iskuulada Dadweynaha Portland si laguugu caawiyo dib ugu soo noqoshada iskuulka: 503-916-3956
Raadi iskuulkaaga, barro waxyaabaha kusaabsan codsashooyinka, bakhtiyaa nasiibka iyo wax kabaddan Isqorida Iskuulada Dadweynaha Portland iyo Xarunta Wareejinta:503-916-3205; enrollment-office@pps.net; 501 N. Dixon St., Suite 140
Xuquuqaha iyo Arimaha gaarka ah
Oggolaanshaha sawirka: Fadlan kuwar geli xafiiska iskuulkaaga haddii aadan doonayn in ardaygaaga laga qaado sawir ama laga duubo fiidiyow loo isticmaalayo joornaalada warka Iskuulada Dadweynaha Portland, boggaga internetka, Facebook, warbaahinta warka iyo wax kabaddan intaan.
Oggaysiisyada sannadlaha ah: Iskuulada Dadweynaha Portland waxay soo saartaa oggaysiisyo loogu talogalay qoysaska kuwaas oo khuseeya:
qaybinta “macluumaada buugga” ka ahaata diiwaanada waxbarashada ardayga;
sii deynta macluumaada isqorida ciidanka iyo kulliyada;
Ilaalinta Bedelaada Xuquuqaha Ardayga;
darajooyinka aqooneed ee macalinka ee kujira Cinwaanka I ee iskuulada;
qaybinta macluumaada ka ahaata kooxaha aan iskuulka-ahayn;
warbixinta gooni ahaanshaha iyo xakamaynta nafta sannadlaha ah.
Wargelinta Sanad laha ah ee Qoyska
Dugsiyadda Guud Portland waxaa laga doonayaa in ay qaybiso shan wargelinood oo sanadle ah kuwan oo ku jeeda qoysaska, waxay xambaarsanyihiin macluumaad muhim ah oo la xidhiidha xuquuqdooda iyo tan ardaydooda, fadlan akhri (1) qaybinta macluumaadka diwaanka kan oo ka imnaya diwaanka waxbarasho ee ubadkaaga; (2)diiwaanka ardayda xuquuqda wargelinta sanadlaha ah;(3) bixinta macluumaadka ardayga iyadda oo loo adeegsanayo shaqaalaynta xagga ciidamadda iyo waxbarashadda sare;(4) Illaalaynta xuquuqda dadwaynaha; (5) iyo qoysaska oo leh xuquuqda in ay ogaadaan aqoonta macalinka gaar ahaan dugsiyadda Qaybta I.
1. Macluumaadka Diiwaanka
Qanuunka Khusuusiga iyo Xuquuqda Waxbarasho ee Qoyska (FERPA), qanuunka federaalku waxa uu ka doonayaa Dugsiyadda Guud ee Portland in ay helaan ogolaashahaaga oo qoraal ah marka ay timaado in la muujiyo inta badan macluumaadka shakhsiyadeed ee diiwaanka waxbarashadda ubadkaaga. Siday noqotaba, Dugsiyadda Guud ee Portland waxaa dhici karta in ay muujiyaan sida ugu haboon “macluumaadka diwaanka” iyadii oo aan qoraal aad ku ogolaanayso lagaa helin, hadii aadan usheegin degmadda in aysan sidaa samayn, raacayana nidaamka degmadda.
Ujeedada guud ee macluumaadka diwaanku waa in ay loo ogolaado Dugsiyadda Guud ee Portland in ay ku darto macluumaadka noocan ah ee diwaanka waxabarashadda ubadkaaga qayb ka mid ah macluumaadka ay daabacaan dugsiyadu. Tusaalaha waxaa ka mid ah: Riwaadaha, ku muujinaya dowrka ardayga riwaadaha; in uu ka mid noqdo liiska abaalmarinta, xafladaha qalinjebinta; iyo qaybaha ciyaadhaha, sida legdinta, muujinta culays iyo dherer ee xubno ka tirsan kooxda.. Macluumaadka diiwaanka oo aan sida badan lagu tirin in uu dhibaato wayn keenayo ama uu meel kaga dhacayo khusuusiyadii qofka hadii la siidaayo, ayaa sidoo kale waxaa la tusi karaa ururo dibadda ah iyadii oo aan waalidkii waxba laga wargelin ama aan laga helin qoraal ogolaasha ah, ururadda dibadda ah waxaa ku jira, walow aysan ku koobnayn, shirkadaha sameeya qalabka fasalka ama daabaca buuga sanadlaha dugsiga. Marka lagu daro laba sharciyadda federaalka ah ayaa qasab kaga dhigaya dugsiyadda hela dhaqaalaha Sahrciga dugsiyadda hoose iyo Sare ee 1965 ACT 1965 (ESEA) in ay bixiyaan macluumaadka ardayga iyadii oo loo adeegsan doono ushaqaalaynta ciidamadda, markii la codsado. Hadii aysan waalidka/haguhu aysan sii sheegin in la shaaciyo macluumaadka hadii aan iyagga ogolaasho qoraal ah aan laga haynin. Hadii aadan doonaynin in Dugsiyadda Guud ee Portland ay baahiyaan macluumaadka diwaanka waxbarasho ee ardaygaaga iyadii oo aan ogolaasho lagaa haysan, waa in aad usheegtaa adiga oo usoo qoraya degmadda mudo 30 cisho gudahood ah ka hor diiwaangelinta.
Dugsiyada Guud ee Portland waxay u aqoonsantahay macluumaadka ardayda kuwan soo socda:
Ka qayb qaadashadda ciyaarahaa si caalami ah loo aqoonsaday
Culayska iyo dhererka xubno ka tirsan kooxda
Shahaadooyinka, abaalmarinadda la bixiyo.
Madaadaa uu baranayo
Dugsiyadii uusoo dhigtay
1 Sharciyadaas waa: Qaybta 9528 ee Qanuunka Waxbarashadda Dugsiyadda Hoose iyo Sare (20 U.S.C. 7908), sidii loogu cadilay Qanuunkii 2001 ee Ardayna Yaan Aqoon Daro Looga Tegin 2001(P.L. 107-110), sharcigii waxbarashadda, iyo 10 U.S.C. 503, sidii loogu cadilay qaybta 544, Qanuunka Ogolaashaha Qaranka ee sanadkii 2002 (P.L. 107-107), sharciyeentii bixisay dhaqaalaha ciidanka xooga qaranka
2. Diwaanka Ardayga: Xauquuqda wargelinta sanadlaha ah
Qanuunka Khusuusiga iyo Xuquuqda Waxbarasho ee Qoyska (FERPA), wuxuu awoodsinayaa walidiinta iyo ardayda ka wayn 18sano(aradyda mudan) xuquuq dhowr iyadii oo la ixtiraamayao diwaanka ardayda. Xuquuqdaasu waxa ay yihiin:
A. Xuquuqda in la eego oo la fiiriyo diiwaanka waxabrasho ee ardayga 45 cisho ee dugsiga ay soo gaadho codsiga in fursad loo siiyo. Waalidiinta ama ardayda mudan waa in ay codsigooda usoo gudbiyaan maamulaha dugsiga codsi qoraal ah tan qeexayasa diwaanka ay doonayaan in ay eegaan. Howlwadeenadda dugsiga ayaa diyaarinaya in fursad loo siiyo waalidka iyo ardayga mudan waqtiga iyo goobta ay tahay in diwaankaa lagu eego.
B. Xuquuda in wax laga bedelo diwaanka ardayga tan ay waalidka iyo ardayga mudane aaminsanyihiin in ay wax ka qaldanyihiin ama si aan sax ahayn loo dhigay, waalidiinta ama ardayga mudane waxay waydiin karaan dugsiga in wax laga bedelo diwaannka ay aaminsanyihiin in uusan sax ahayn ama wax ka qaldanyihiin. waa in ay ugu qoraan si cad maamulaha iyagga oo tilmaamaya qaybta ama diiwaanka ay doonayaan in wax laga bedelo, iyaga oo cadaynaya sababta aysan sax u ahayn ama loo qalday hadii dugsigu gaadho in aan waxba laga bedelin sidii ay ucodsadeen waalidka iyo ardayga mudan, dugsigu waxa uu usheegi donaa waalidka iyo ardayga go'aanka ay gaadheen, isaga oo wargelinaya in ay xaq uleeyihiin in ay dhagaysi codsadaan tan la xidhiidha codsigoodii in wax laga bedelo diwaanka. Macluumaad siyaadda ah oo taa la xidhiidha iyo nidaamka loo qabanayo dhagaysiga waxaa lasoo gaadhsiin doonaa waalidka iyo ardayga kolka loo sheegayo xaqa ay ueelyihiin in ay dhagaystaan.
C. Xaqa ogolaashaha bixinta macluumaadka ka kooban mid shakhsiyadeed ee diiwaanka waxbarasho ee ardayga, marka laga reebo ogolaashaha baahinta FERPA iyadii oo aan ogolaasho loo haysan. Ogolaashaha mar keliya, kan u ogolaanaya bixinta macluumaadkaa iyadii oo aan ogolaasho la helin, waa tan la xidhiidha Howlwadeenadda dugsiga iyadii ay jidho arin mudan oo danta waxbarashadda ah. Howl-wadeenadda dugsiag waxaa ku jira, walow aysan ku koobnayn, ruuxa laga shaqaaleeyey PPS isagii oo qaybta maamulka ka tirsan, hogaamiye, macalin, xubin caawineed howlwadeenadda ka mid ah(marka lagu daro shaqaalaha caafimaafka iyo kuwa meel marinta sharciga), Howlwadeenadda gudiga;ashkhaasta, shirkadaha ay PPS caqdiyadda la gashay si ay ugutaan shaqo muhim ah (sida qareenadda, xisaabiyayaasha, la taliyayaasha caafimaad, ama duugduuge) ama kuwa si gooni ah u gudanaya howlo gaadh ah oo uu dugsigu udirsaday (sida ururadda la shaqeeya Dugsiyadda Portland, kooxda qiimeeyayaasha qatarta, ama dugsiyadda midaynaya dugsiyadda beesha) iyo waalid ama arday u adeegaya gudi caalami ah, sida kuwa anshaxa, ashtakadda ama caawinaya howlwadeenadda dugsi kale si ay ugudato/guto waajibkiisa, howlwadeenadda dugsigu waxa ay mudanyihiin in ay eegaan hadii ay u baahdaan in dib loo eego diwaanka waxbarasho si ay ugutaan si xirfadaysan mas'uuliyadda ka saaran arimahaa. Marka la codsado in la siidaayo diwaanka waxbarasho kan oo loo ogolaanayo howlwadeenadda dugsi kale oo degmadda ah kan oo uu ardaygu danaynayo in uu dhigto.
D. Xaqa aad u leedahay in aad ugudbiso dacwad Wasaaradda Waxbarashadda ee Maraykanka adiga oo ka ashtakoonaya iyadii oo uu dugsigu ku guuldaraystay dabaqidda shuruudaha FERPA. Magaca iyo cinwaanka maamula FERPA waa: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20202-46052
Dhamaan siyaasadaha PPS waxaad ay ku dhiganyihiin: https://www.pps.net/Page/1477
3. Bixinta macluumaadka ardayga si loogu adeegsado shaqaalaynta xagga ciidamadda iyo waxbarashadda sare
Dowladda dhexe waxa ay ka doonaysaa degmadda in ay bixiso marka laga soo codsado, magacyadda, cinwaanadda iyo telephoneadda ardayda heerka dhexe iyo kuwa dhamaystirka ku jira sababta iyadii oo la doonayo in loo qaato ciidamadda iyo jaamacadaha.
Hadii aadan doonaynin in dugsiga degmadu bixiyo macluumaadka la xidhiidha ubadkagaa tan ku jeeda uqaadashadda ciidamadda iyo kuliyadaha waxbarashadda sare, waxaad leedahay fursad aad “kaga reebi karto”.>Si hadaba aad sidaa uyeesho, waa in aad calaamaysaa halka ay ku qorantahay “MAYA” mid ama labadda kuwa tilmaamaya ciidamada ama waxbarashadda sare marka aad buuxinayso warqadda macluumadka ardayga kadibna saxiix oo kusoo celi islamarkiiba dugsiga. Hadii uu ubadkaagu ka waynyahay 18, iyadda ama isaga waa in ay saxiixaan warqadda.
Hadii aadan calaamayn “NO” ama hadii aadan soo celin warqadda diiwaangelinta/cadaynta, degmadu waa ay ku qasbantahay in ay ugudbiso macluumaadka ardayga ciidamadda ama kuliyadaha waxbarashadda sare markii ay codsadaan. Marka la gudbiyo macluumaadkan degmadu wax awood ah kuma lahan sida ay kooxahaa kale u adeegsanayaan macluumaadka la bixiyey ee ardayga.
Liiska iyo shuruudaha uqaadashadda ciidamadda iyo kuliyadaha waxbarashadda sare si aad fursad ugu hesho macluumaadkaa ka eeg xidhiidhka xaga hoose ku lingaxan http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht10-09-02.html
Hadii aad qabto wax un su’aal ah, fadlan la xidhiidh la taliyaha dugsigaaga.
4. Illaalinta Xuquuqda Dadwaynaha
Ilaalinta xuquuqda dadwayanaha (PPRA) waxay ku tayeynaysaa waalidiinta xuquuqo dhowr ah qabashadda sahanadda, qaabashadda iyo adeegsiga macluumaadka iyadii oo ujeedadu tahay suuq-geyn, iyo qaybo egida jidhka ah. Kuwaas waxaa ka mid ah xuquuqda in;
La helo ogolaaho ka hor inta aan qasab lagaga dhigin ardayga in uu soo gudbyo sahan kan oo quseeya mid ama laba ka mid ah qaybaha soo socda ee la ilaaleeyey, hadii sahankaa lagu maalgelinayo qayb ama ama sida uu dhanyahay Wasaaradda Waxabarashadda ee Maraykanka: siyaasadda uu la hayo, imaanta ardayga ama waalidka, dhibaato xagga dhimirka ama nafsiyadda ah ee ardayga ama qoyskiisa, habdhaqan xagga noociyadda ah ama dabciga, bulshayn aan sharci ahayn, dembi uu isagu galay, dabci hooseeya, xaalado adag oo kuwa kale ah kuwan oo qoys dhow ay yihiin, xidhiidh sharci ahaan la ogolyahay oo looga faa’iidaystay sida qareen, dhakhtar, ama wadaad; dhaqanka diinta, imaanta ardayga, ama tan waalidka, ama dakhliga, intaa wixii aan ahayn waxaa shardi ah in la cadeeyo mudnaanta barnaamijka.
Hel wargelin iyo fursad aad kaga saarto ardayga sahan walba oo la ilaaleeyey, iyadii oo aan loo eegin maalgelinta, mid walba oo xaalad degdeg ah ahayn, qiimeyn xagga muuqa ah ama eegid xagga caafimaadka ah iyadii oo ujeedadu ay tahay xaadiridda xarumaha waxbarashadda, tan oo ay maareeyeen dugsiga ama cid wakiil u ah, iyadii oo aysan daruuri ahayn in judhiiba la illaaleeyo caafimaadka iyo badbaadada ardayga, marka laga reebo maqalka, aragga, ama eegid loo dhanyahay ama nooc un baadhid caafimaad ah kan oo lagu ogolaaday ama uu gobolku doonayay iyo howlo un qayb ka noqon kara uruurinta, muujinta ama adeegsiga macluumaad shakhsiyadeed kan oo lagahelay ardayga iyadii oo ay ujeedadu tahay suuqgeyn ama in la iibiyo ama in la doonayo in macluumaadkaa loo qaybiyo qolyo kale.
Filo, kolka la codsado iyo ka hor maamulka ama adeegsiga macluumaadka sahan la ilaaleeyey oo ardayda ah; Walxihii loo adeegsaday in lasoo uruuriyo macluumaadkaa la illaaleeyey ee ardayga iyadii oo ay ujeedadu tahay mid un ka mid ah suuqgayntaa xagga sare lagu xusay, iibin ama ujeedooyin kale oo la xidhiidha qaybtinta; iyo qalab tacliimeedka la adeegsaday iyadii oo qayb ka ah manhajka waxbarasho.
Xuquuqdaasi waxay ka wareegaysaa waalidka oo u wareegaysaa arady gaadhay 18 sanadood ama aan weli qaan gaadhin doortayse in uu waalidkii ka madax banaanaado iyadii oo la raacayo sharciga gobolka.
Waalidka aaminsan in xuquuqdoodii lagu xadgudbay waxay gudbin karaa cabasho ay udiraan:: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202-5901
5. Qaybta I: Xaqa waalidku uleeyahay in uu ogaado.
Marka waalidku codsado, Dugsiyadda Qaybta I waa in iyadii oo waqtigii loo qabtay la eegayo la muujiyaa ugu yaraan:
Hadii uu macalinku gaadhay shuruudaha warqadda ogolaashaha macalinimadda ee fasaladda iyo maadooyinka uu markaa dhigayo.
Hadii uu macalinku ku dhigayo xaalad degdeg ah ama ku meel gaadh iyadii oo laga dhaafay heerkii lagu gaadhi lahaa warqadda ogolaashaha macalinimadda.
Hadii uu Shahaadadda jaamacadda oo ah in mudnaanta la siiyeen baridda, shahaado kaste oo heer sare oo uu haysto macalinku, iyo maadada uu markaa dhigayo.
Hadii ubadka la siiyey adeega caawiyaha macalinka (Kalkaaliye)iyo hadii ay jidho, aqoonta ya u leeyihiin taa.
Marka intaa lagu daro cadaynta xuquuqda ay u leeyihiin in ay codsadaan macluumaadka aqoon iyo heerka waxbarashaddiisa, dugsigu waa in uu usii sheegaa hadii lagu qorayo macalinkaa. Ama uu udhigay in ka badan afar todobaad macalin aan sidaa aqoontiisu usii raaridnayn iyadii oo lagu qeexayo sharciyadda federaalka.
6. Distribution of Information from non-school groups: Under Board Policy 3.30.35 and Administrative Directive, schools may distribute information from certain non-PPS groups. The groups providing this information are not endorsed or sponsored by Portland Public Schools. District policy prohibits discrimination on the basis of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex, and sexual orientation BP 1.80.020. Not all outside groups comply with the district’s non-discrimination policy. Families are strongly encouraged to review all materials closely.
Portland Public Schools completes an annual report detailing the use of physical restraint and seclusion for the preceding school year. The report is available at www.pps.net.
Arag PPS bogga internetka oo ku qoran luqaddaada
Waxa kale oo aanu idiin ku yeedhi xagga dhirtuba bogga internetka PPS wixii macluumaad dheeraad ah. Waxaan ku rakibtay badhan Google Translate in ay soo saari doonaan turjumaad adag hoose ee bogga internetka kasta. Waxa ay u muuqataa sida tan:
Wixii hanuun ama gargaar dheeraad ah, fadlan la xiriir Khadka Luqadda. Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka tag fariin la dabiiciga ah ee u yeedhataana iyo xubin ka mid ah shaqaalaha laba luqadood ku soo wici doona: 503-916-3586